Ukubuyekezwa kwe-UE BOOM 2: ukuhlaziywa ngezici, intengo nemibono | Izindaba zamagajethi
Ukubuyekezwa kwe-UE BOOM 2: idizayini enhle yesipikha esingenantambo esinekhwalithi futhi esimelana kakhulu
U-Alfonso De Frutos | | Izipikha, Izibuyekezo
I-Ultimate Ears ingenye yezinkampani ezibaluleke kakhulu kulo mkhakha. Izipikha zayo ezivela kulayini we-BOOM zimangazwe ukwakheka kwazo okukhangayo, ukumelana nekhwalithi yomsindo. Manje ngikulethela okuphelele Ukubuyekezwa kwesikhulumi se-UE BOOM 2, imodeli yakamuva yedivayisi futhi ezojabulisa abathandi bomculo.
Umlandeli we-UE BOOM uqukethe a amandla kuzipikha zakho akhuphula ama-25% ngokuqhathaniswa nemodeli yangaphambilini, ngaphezu kokuba nobubanzi be-bluetooth obufinyelela kumamitha angamashumi amathathu, ngakho-ke ungayithatha noma yikuphi. Futhi uma sibheka ukuthi iyamelana nokushaqeka nokuwa, ngaphezu kokuba nayo Ukuqinisekiswa kwe-IPX7 Ukuze sikwazi ukuyifaka emanzini ngaphandle kokukhathazeka, sinesinye sezipikha ezingenantambo ezinhle kakhulu emakethe.
1 I-UE BOOM 2 inomklamo okhangayo futhi owesabekayo
2 Ikhwalithi yomsindo ehehayo evela kuzipikha eziphathekayo
4 Amaphoyinti afanele
5 Amaphuzu wokulwa
I-UE BOOM 2 inomklamo okhangayo futhi owesabekayo
Into yokuqala oyibonayo lapho uqala ukuthatha i-UE BOOM 2 ukuthi sibheka umkhiqizo yakhiwe kahle futhi lokho kukhipha ikhwalithi kusuka kuma-pores ayo. Isipikha sinesembozo senjoloba esisonga ngocingo, sikwenze kube mnandi kakhudlwana ekuthinteni futhi sinikeze ukubamba okuhle. Ngale ndlela, noma ngabe i-UE BOOM 2 iba manzi, ungayithatha ngaphandle kokukhathazeka ngokushelela kwayo.
Ubukhulu bayo obuncane, ine- ububanzi be-67mm nokuphakama okungu-180mm yenza i-UE BOOM 2 ibe usizo kakhulu futhi ingathathwa noma ikuphi. Gqamisa umumo wayo oyindilinga osiza ukubanjwa kwedivayisi. Ekugcineni, amagremu ayo esisindo angama-548 yi-icing kwikhekhe ledivayisi eyenzelwe ukuyisa noma ikuphi.
Phezulu kwe-UE BOOM 2 kulapho i- isikhulumi inkinobho yokuvula / yokuvala, ngaphezu kwenye inkinobho encane esetshenziselwa ukuvumelanisa i-UE BOOM 2 nganoma iyiphi idivayisi ye-Bluetooth.
Kakade ngaphambili sithola ifayela le- okhiye bokulawula ivolumu. Indlela yabo ingaphezu kokulungile futhi banikeza umuzwa ophumelele kakhulu ekuthinteni, bazi ngaso sonke isikhathi lapho ubacindezele. Isikhundla sayo sikhululekile futhi siyasebenza. Khumbula ukuthi lezi zipikha zenzelwe ukuthi zithathwe noma yikuphi futhi akudingeki ukuthi uthinte ifoni yakho olwandle ukukhulisa, ukwehlisa ivolumu noma ukushintsha izingoma kuyiphuzu okufanele ulibheke. Kamuva ngizokhuluma ngalo msebenzi.
Ekugcineni, ezansi kwe-UE BOOM 2 kulapho ichweba litholakala khona i-USB encane ukushaja idivayisi, kanye no Okukhipha umsindo okungu-3.5mm nendandatho encane yokubamba izipikha kunoma yikuphi ukwesekwa. Ngamafuphi, i-UE BOOM 2 ine-design enhle ezosivumela ukuthi siyiyise noma yikuphi. Ngabe ufuna ukuhamba ngebhayisikili? Namathisela isipikha estendini samanzi futhi ujabulele umculo.
Ngokwami Ngizisebenzisile ebhishi, ukushushuluza, ukuhamba ngesikebhe futhi nsuku zonke eshaweni(omakhelwane bami bangizonda kakhulu). Vele, kufanele kucatshangwe ukuthi i-UE BOOM 2 iyacwila ngakho-ke ngincoma ukuthi, uma uzozisebenzisa emanzini, ubophela ucingo ivesti lakho ngeringi engezansi, ngakho-ke uzokonga okungadingekile ukwethuka.
Ikhwalithi yomsindo ehehayo evela kuzipikha eziphathekayo
Idizayini ye-UE BOOM 2 iphelele: ithuluzi elikhanyayo, likhululekile ukugqoka futhi libambelele kahle ukuthi lisetshenziswe kunoma yisiphi isimo, kodwa lesi sikhulumi sizwakala kanjani? Sengivele ngikutshela ukuthi, ngokubheka izilinganiso zayo, ingesinye sezipikha ezingenantambo ezinhle engizamile. Ngaphambi kokufaka lolu daba, ngikushiya nezimpawu zobuchwepheshe ze-UE BOOM
Isipikha esingenantambo esingu-360 degree
Ukungena kwamanzi (i-IPX7: kufika emizuzwini engama-30 nokujula kwemitha eli-1) nokumelana nokushaqeka
Amahora we-15 wempilo yebhethri (Isikhathi sokushaja: amahora we-2.5)
I-Bluetooth A2DP enebanga lamamitha angama-30
Uhlelo lokusebenza olungenantambo nezibuyekezo
Ukuphuma komsindo okungu-3,5mm
Ibanga lemvamisa: 90 Hz - 20 kHz
Ephepheni sinakho okunye izipikha eziphelele kakhulu. Futhi uma kuziwa ekusebenziseni, zingcono kakhulu. Ekuqaleni kwendatshana ngikutshele ukuthi lawa ma-UE BOOM 2 anamandla angaphezu kwama-25% uma kuqhathaniswa nemodeli yangaphambilini futhi, ngemuva kokuhlola womabili amamodeli, sekucacile ukuthi umenzi akenzi ihaba.
Akunandaba ukuthi izipikha zizwakala kangakanani, uma ikhwalithi yomsindo iphansi, amandla ayo awasizi ngalutho. Ngenhlanhla Isikhulumi se-UE BOOM 2 sizwakala sihle impela, enikeza umsindo ocacile, wekhwalithi ephezulu.
Umsindo ulinganiselwe impela, ufinyelela kufayela le- ikhwalithi yomsindo enhle kuze kufike ku-90% wamandla agcwele. Ukusuka lapho kuvela ukuphazamiseka okuncane nomsindo, kepha sengivele ngakutshela ukuthi ngamandla amangalisayo ahlinzekwa yilesi sikhulumi, iningi labasebenzisi ngeke lidinge ukukhulisa ivolumu yesipika ngaphezu kuka-80%. Ngisho ukusetha indawo yephathi noma izoso, i-70% ingaphezu kokwanele.
Su I-Bluetooth Low Energy inebanga lamamitha angama-30, ekuvumela ukuthi usebenzise izipikha ebangeni elingaphezu kwelanele. Ekhaya, ngishiye ifoni ixhunywe cishe ngamamitha ayi-15, kunezicabha ezimbili phakathi, futhi isipikha sisebenze kahle.
La Ukuzimela kwe-UE BOOM 2 kungamahora we-15 wokusetshenziswa. Lapha ngifinyelele impela emahoreni ayi-15 ivolumu ingama-30-40% kepha ukubeka umhlanga nokubeka isipika kumandla angama-80% ukuzimela kwehlela kumahora ayi-12, isibalo esisabukeka futhi esiningi ngokwanele. Ngaphezu kwalokho, isikhulumi singena kwimodi yokulala ngemuva kwesikhashana singasisebenzisi ngakho-ke akudingeki sikhathazeke ngokuyicisha nokuyicisha ngoba ngohlelo lokusebenza singasebenzisa noma senze i-UE BOOM 2 isebenze ngendlela esithanda ngayo. Futhi ibhetri ishaja ngaphezu kwamahora amabili nje, ngakho-ke akukho lutho lokugxeka kulokhu.
Intsha ethakazelisa kakhulu iza ne Ukulawulwa kokuthinta; ngokwesibonelo lapho siphakamisa i-UE Boom 2 ngesandla esisodwa futhi sithinta kancane ngentende yesinye isandla engxenyeni engenhla yesipikha, sizomisa okwesikhashana ukudlala size sithinte ingxenye engenhla futhi. Futhi ngokuthinta kabili okusheshayo sizoqhubekisela phambili ingoma. Ngale ndlela ngeke kudingeke ukuthi siluthinte nhlobo ucingo uma sifuna ukucula izingoma.
Abafana base-Ultimate Ears benze ifayela le- Isicelo esiphelele esizosivumela ukuthi silawule imisebenzi ehlukile ye-UE BOOM 2 ngocingo lwethu. Uhlelo lokusebenza, iyahambisana amadivayisi we-Android ne-iOS, ikuvumela ukuthi ubone izinga lebhethri, ivolumu yesipikha kanye neminye imininingwane enelukuluku njengokuthi kungenzeka ukuvumelanisa ama-smartphones amaningi ngasikhathi sinye ukuze ngamunye akwazi ukubeka umculo awufunayo. Singaxhuma ngisho nezipikha ze-UE BOOM noma ze-UE eziningana ukulalela umculo kumadivayisi amaningi ngasikhathi sinye! Lo msebenzi ungimangazile ngoba ukuvumela ukufaka uhlelo lomsindo oluhle ngamadivayisi ambalwa.
Enye imininingwane ethakazelisa kakhulu iza ne Ukuqinisekiswa kwe-IPX7 enikeza ukumelana kwamanzi kwe-UE BOOM 2, ukwazi ukufaka idivayisi kufinyelela kumitha eli-1 ukujula imizuzu engama-30. Ngikuhlolile eqhweni nasemanzini futhi isipika sisasebenza kahle. Vele, njengoba bekulindelekile, ngaphansi kwamanzi ngeke zikhale njengoba isignali ye-bluetooth ilahlekile. Kulula njengokukhipha i-UE BOOM 2 emanzini ukuqhubeka nokujabulela ikhwalithi yomsindo wayo.
Ngalokhu, i-UE BOOM 2 inezindwangu ezithile ezivala izindawo zokuphuma, lezi kufanele zivaliwe kahle ukuze amanzi angangeni, kodwa ungakhathazeki ngokuthi noma ngabe lina kangakanani, iqhwa noma ukuduma kwezulu, ungasebenzisa isipikha ngaphandle kwezinkinga. Imfihlo yakho? UE BOOM 2 azinazo izingxenye zensimbi.
Yize bevela ku-Ultimate Ears bengakafuni ukunika i-UE BOOM 2 noma yisiphi isitifiketi sezempi, kufanele ngikusho lokho ifoni imelana nemiphumela nokuwa ngempela. Ngesikhathi sesethulo ngibone abantu abaningana bekhuphukela phezulu ukukhombisa ukumelana kwabo futhi imodeli yami iwele amahlandla ambalwa, ngiyaxakaniseka uma ngithembekile, futhi ayikaze ilimale, ngakho-ke ngiyakuqinisekisa ukuthi I-UE BOOM 2 isikhulumi esinzima.
El I-UE BOOM 2, etholakala ngemibala ehlukahlukene ngakho-ke ungakhetha imodeli oyithanda kakhulu, inenani elisemthethweni lama-euro angama-199, yize okwamanje ungayithenga ku-Amazon ngokuchofoza lapha ngama-euro ayi-133 kuphela. Isivumelwano sangempela uma sicabanga ngamathuba alesi sipikha se-bluetooth esingangenisi manzi.
Ukubuyekezwa kwe: U-Alfonso De Frutos
Ikhwalithi yomsindo emangalisayo
Ukumelana namanzi, ukushaqeka nokudonsa
Inani elithandekayo lemali
Yize isendalini, intengo yayo esemthethweni yama-euro angama-200 ingabuyela emuva
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Isithombe nomsindo » Izipikha » Ukubuyekezwa kwe-UE BOOM 2: idizayini enhle yesipikha esingenantambo esinekhwalithi futhi esimelana kakhulu
Ngine-UEBOOM futhi konke kuhamba kahle, kepha lapho ibhethri langaphakathi lingasekho, sala isipikha. Le nkampani ingitshele ukuthi abanawo amabhethri abazowafaka esikhundleni ... futhi ngaphandle kwebhethri isipikha asisebenzi noma ngabe sixhunywe kugesi. ISIKHUMBUZO SE-PROGRAMMED: isipikha sihlala inqobo nje uma ibhethri lihlala lisebenza, kusukela kulowo mzuzu, kudoti.
URicardo Reyes kusho
Ngithenge i-UE Boom 2 futhi kungamanga ukuthi ihlala amahora ayi-12 ngevolumu engu-80% ende kunazo zonke ehlala amahora ama-2 okuyinhlekelele, ekugcineni bekufanele ngiyishintshe ibe yiJBL, kungaba kuhle uma umkhiqizo Ukucaciswa kungokoqobo futhi kufakiwe esivivinyweni
Kepha ucabanga ukuthi laba bantu bayayihlola ngempela imikhiqizo? Abangenalwazi Laba balingisi abagcwele ku-Intanethi futhi abazibiza "ngochwepheshe", "abathandi bezobuchwepheshe" noma enye inkulumo ebucayi bazinikele ekukopisheni nasekunamathiseleni ukukhishwa kwabezindaba, bebahlobisa kancane futhi benza ukumemezela okukhulu, ngethemba eliyize lalokho brand babanikeze imikhiqizo yamahhala ukuze bayisebenzise futhi bayijabulele.
Ngesampula, le ndatshana. Akukho lapho kukhombisa khona amandla wangempela wesipika noma ukuthi ukweqa phakathi kwesikali sevolumu kukhulu kakhulu.
Yebo, bheka, nginayo futhi ngiyaqinisekisa ukuthi ihlala ngaphezu kwamahora ayi-10 ku-70 no-80, okusho ukuthi eyakho izoba nenkinga.Yabelana nge-jbl enomsindo ongcolile futhi kakhulu kwisitayela sakho sokugxeka nokungcolisa umkhiqizo owenze kahle umsebenzi wasekhaya.ngemkhiqizo wakho ungafani ne-jbl kunabanye nje.
Noma kunjalo, qhubeka uhamba ne-jbl, engeke ihlale ngaphezu kwamahora ayi-100, ngokuqinisekile ngeke ithwale noma ishaje ibhethri lapho ushaya ngamandla omzimba wakho futhi kuzwakala njengama-farts ezingelosi ... woza
U-Albert mosquera kusho
Angikaqondi namanje ukuthi lo mkhiqizo, ikakhulukazi ozinikele ekwenzeni amagundane e-PC, ube kanjani phakathi kwalabo okuthiwa “izipikha ezihamba phambili ze-bluetooth emakethe. Bahlala bevela "ekuhlaziyweni" ngobulukhuni obuncane kanjena. Ukhokha malini uLogitech ukuze azenze olunge kangaka? Kungenzeka kanjani ukuthi lolu doti lwezipikha, ngokuntuleka ngokuphelele kwencazelo nokuhlukunyezwa kwama-bass, luthinta amahlombe neHarman Kardon, Vifa, Bowers & Wilkins, JBL noma iBang & Olufsen? Lokho ukusho nje ochwepheshe abambalwa abasebenza ngomsindo ophezulu kakhulu.
U-Israyeli Amantongomane kusho
Ngisanda kuthenga i-UEboom2 futhi nginokungabaza ngobude besikhathi, ihlala kancane kakhulu futhi ayifiki emahoreni ama-3. Noma yimuphi uchwepheshe ongisizayo? Ngingathanda ukwazi ukuthi ngabe umuntu othile ufake isicelo sesiqinisekiso nokuthi ngayiphi indlela.
Phendula ku-Israyeli Nuts
ISeagate ikhuluma ngama-hard drive ayo amasha ayi-14 no-16 e-TB
IMegaupload 2.0 ibambezelekile, ngenxa yeCanada Stock Exchange